राजनीति Archives - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
बैशाख २८, दाेलखा । काेराेना भाईरस संक्रमणका कारण बागमती प्रदेशका सांसद एवम् नेकपा एमालेका नेता पशुपति चौलागाईंको निधन भएको छ । चौलागाईंको मंगलबार साँझ निधन भएको एमाले स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । दोलखाका चौलागाईं कोरोना संक्रमणपछि केही दिनदेखि मनमोहन अस्पतालमा उपचार गराइरहेका थिए । एमालेका पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका चौलागाईं दोलखा (ख) बाट
बैशाख १५, दाेलखा । नयाँ नेतृत्वकाे लागि अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा दोलखा कांग्रेसले क्रियाशिल सदस्यको टुंगाे लगाएकाे छ । काँग्रेस दाेलखाकाे बुधबार बसेकाे बैठकले ६ हजार ८ सय ३ नयाँ क्रियाशिल सदस्यता स्वीकृत गरेकाे हाे । करिब एकवर्षदेखि फारम भरेर बुझाएका मध्ये साे संख्याकाे क्रियासिल सदस्य स्वीकृत गरिएकाे नेपाली काँग्रेस दाेलखाका सभापति रुद्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए
बैशाख १०, जफे । बिहिबार अपरान्ह मृत्यु भएका नेपाली कांग्रेस दोलखाका पुर्ब सभापति एबं नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा देबीप्रसाद न्यौपानेको शुक्रबार दाहसंस्कार गरिएको छ । न्यौपानेको बिहिबार तामाकोशी गाउँपालिका–३ जफे स्थित आफ्नै घर छेउमा रुखको मुढाले किचेर निधन भएको थियो । न्यौपाने २०२७ सालमा जनकपुर अञ्चलको गौरीशंकर छात्र समितिको सदस्य हुँदै बिद्यार्थी राजनीतिमा लागेको बताईएको छ
फागुन १३, भेड्पु । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दोलखाले संञ्चालन गरेको संगठन सुदृढिकरण अभियान तथा जिल्ला अधिवेशन तयारीको क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मेलुङ गाउंपालिकाको अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । विहिवार मेलुङ गाउंपालिका वडा नं. ४ भेड्पुको बुद्धचोकमा आयोजिल भेलाले रामबहादुर लामाको अध्यक्षतामा १५ सदस्यिय राप्रपा मेलुङ गाउं समिति गठन गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रिय
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विगु गाउँपालिका वडा नम्बर ४ वडा समिति गठन
फागुन, १, विगु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विगु गाउँपालिका वडा नं. ४ मा बडा समिति गठन भएको छ । शनिवार सम्पन्न भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भेलाले किरण खड्काको अध्यक्षतामा १३ सदस्यिय वडा समिति गठन गरेको हो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता श्री बहादुर खड्काको सभापतित्वमा सम्पन्न भेलाले तोकेका अन्य पदाधिकारीहरुमा उपाध्यक्षहरुमा नवराज ठकुरी, विनोद खड्का र
राप्रपा सुन्द्रावतीका अध्यक्षमा पकुवाल
माघ २७, सुन्द्रावती । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कालिञ्चोक गाउंपालिका वडा नं ९ सुन्द्रावतीका अध्यक्षमा शम्भु पकुवाल सर्वसम्मत भएका छन् । राप्रपा दोलखाले मंगलबार सुन्द्रावतीमा आयोजना गरेको गाउँ अधिवेशनले पकुवालको अध्यक्षतामा ९ सदस्यिय गाउँ पार्टी कमिटि गठन गरेको छ । सोही अवसरमा राप्रपा सुन्द्रावतीको कार्यालय समेत उद्धघाटन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षमा शुक्र थामी, सचिवमा सोम